Magaalooyinka Isbaanishka ee ugufiican ee lagu booqdo baabuur guga | Wararka Safarka
Magaalooyinka Isbaanishka ugu fiican ee lagu booqdo baabuur guga
Wararka Safarka | 30/04/2021 11:06 | Meelaha Dalxiiska loo tago
Ka faa'iideyso xaqiiqda ah in qabowga si tartiib tartiib ah u sii baxayo heer kulkuna uu ka sii kululaanayo adoo booqanaya mid ka mid ah 6da magaalo ee ugufiican Spain inay ku qaataan fasax wacan guga.
IYO… Maxaa kafiican safarka baabuurkeena? Waxaan ku darnaa baararka saqafka gaadhigayaga iyo xiisahayaga! Diyaar ma u tahay inaad ogaato magaalooyinka ugu sareeya xilli ciyaareedkan? Sii wad akhriska!
5 Córdoba iyo daaraheeda May
Haa dabcan. Madrid waa magaalo soo jiidasho leh. Waxay noqon kartaa mid aad u qabow xilliga jiilaalka haddii aad ka timaaddo magaalo diiran, isla markaana aad u kululaan kara xagaaga haddii aad ka timaaddo magaalo qabow. Si kastaba ha noqotee, waa dib u dhalasho oo ubaxaa guga. Qorraxdu, horayba way u kululayd, waxay martiqaadaysaa si xasilloon ugu dhex lugee jidadkeeda soo jiidashada leh iyo jardiinooyinka caleenta ah.
Guga, waxaad ku lugeyn kartaa socod Parque del Buen Retiro (ijaaran doonta harada), raac baaskiil dhanka Parque Juan Carlos I ama Madrid Río. Hadana haddii aadan jeclayn inaad lugeyso, waxaan kugula talineynaa inaad baska dalxiis ku dalbatid baska dalxiiska furan si aad uga faa'iideysato cimilada wanaagsan ama aad raacdo wadada gaarigaaga Doorashada ugu dhaqaale iyo raaxo badan!
Oo maxaa diidaya fuul gaariga kaybalka oo aad u bogi caasimada Isbaanishka xagga sare, intaad ku maydhanayso falaadhaha ugu horreeya ee qorraxda xagaaga?
Haddii aysan kuleylka kuleylka aheyn, waad awoodaa had iyo jeer booqo Qasriga Boqortooyada iyo Kaniisada Almudena.
Kala duwanaanshaha juqraafiga Isbaanishka ayaa adkeynaya in la go'aansado halka ugu fiican ee la aadayo.
Si kastaba ha noqotee, waan doorannaa buuraha maxaa yeelay guga weli baraf ayaa saaran meelaha ugu sarreeya, cagaarka ayaa ku yaal dooxooyinka oo biyuhu way ka soo baxaan dhinac kasta, taas oo u oggolaanaysa inay webiyaashu si xoog leh u socdaan. Nooca shaandhada looma baahna maxaa yeelay beeraha waxay ku gubanayaan ubaxyo, qorraxdu way soo baxdaa cirkuna runtii waa buluug. Maalmuhu way sii dheeraadaan, oo wax kastaaba way isu yimaadaan si ay u abuuraan jawi aad u wanaagsan.
Waxaan sidoo kale ku riyaaqnay tuulooyin yaryar oo leh guryo dhagax ah, ku dheji alwaaxdeeda iyo weelasha ubaxa ee daaqadaha, iyo sidoo kale waddooyinka leh curveyo badan iyo taraafikada yar.
Guga waa wakhti aad ufiican oo lagu soo booqdo Benidorm. In kasta oo ay dad badani sheegtaan si ka duwan, runta ayaa taa ah waa wax ka badan qorraxda iyo xeebta.
Benidorm waxay leedahay magaalo duug ah oo aad u lugeynaya, oo leh baarar badan Waxay ka adeegaan Tapas ka Spain oo dhan oo leh jawi weyn oo ku yaal berriga. Marka lagu daro aagga tubas, Benidorm wuxuu leeyahay makhaayado kala duwan oo u adeega jikada caalamiga ah ka soo dhowaad gees kasta oo adduunka ah.
Waxaad sidoo kale aadi kartaa Mirador de Benidorm, oo ah mid ka mid ah astaamaha magaalada oo isku xira labada xeebood. Laga soo bilaabo aragtidan waxaad ku raaxeysan kartaa muuqaal cajiib ah oo ku saabsan qorrax dhaca iyo qorrax soo baxa.
Valencia waxay nagu soo dhaweynaysaa cimilo qorax leh, dhul balaaran oo sugaya in la buuxiyo iyo paellas-ka ugu fiican ee Spain ay bixin karto, oo hada lagu diyaariyo miisaska banaanka. Dad badan ma jiri doonaan sida xagaaga oo kale, sidaa darteed waxaan heysanaa xeebta nafteena si aan ugu lugeyno xeebta oo laga yaabo inaan u cunno jalaato.
Waxaan u tagi karnaa Magaalada Fanka, magaalada dhex lugee, tag Beerta dhirtaIyo waxyaabo kale oo badan!
Córdoba iyo daaraheeda May
Córdoba waa meesha loo baahan yahay in laga arko Spain bisha May, iyada oo iskutallaabteeda May iyo barxadaha, albaabada, iyo geedaha liinta leh ubaxeen Marka loo barbardhigo bisha kale ee sanadka, magaalada waxaa lagu maydhay nal iyo midab. Intaa waxaa sii dheer, inta lagu guda jiro bishaan caanka ah ee loo yaqaan 'Maystick' ayaa la qabtaa, dhowr guri oo gaar loo leeyahay ayaa daarradooda u fura dadweynaha, ubaxyo ka buuxa, faahfaahin iyo feejignaan dheeri ah u leh qof kasta oo ag maraya.
Masaajidka-Cathedral caan ka ah adduunka hadal la'aan buu kuu daayaa, oo ku dhex lugee xaafadda Yuhuudda, ku dhadhamiso cajaladaha meelaha lagu iibiyo oo waxaad ka ogaataa qaar ka mid ah dhagaxyada magaalada ku qarsoon, sida Viana Palace iyo Alcazar Gardens waa wax lagu farxo. Magaalo dib-u-dhac leh oo taariikh qarniyo badan leh iyo isku dhafnaan dhaqameed oo kala duwan oo aan niyad-jabin doonin
Sevilla waa meel cajaa’ib leh xilligan oo kale sanadkii loogu talagalay Carwada Abriil, oo ka mid ah carwooyinka Andalusiyaanka ee soconaya illaa guga. Dalxiisayaal badan ayaa doorta caasimada Andalus ee guga ay u baxaan ubaxa qurxinaaya jidadkeeda, jawiga damaashaadka dadkiisa iyo bilicda gobolka.
Si aad u booqato flamenco ayaa ka muuqata Seville Waa mid ka mid ah howlaha lagama maarmaanka ah, oo ay weheliso socod ku dhex socoshada dhismayaasha, qaadashada raacitaanka faras jiido iyo dhadhaminta gastronomy deegaanka Maalmo yar gudahood waxaad awoodi doontaa inaad ogaato wax walba oo ku saabsan magaalada. Safar dhamaadka usbuuca ah ee Seville guga ayaa kaa dhigi doonta inaad jacayl la yeelato magaalada waxayna kaa dhigeysaa inaad rabto inaad ku laabato wakhti kasta oo sanadka ah.
Hadda waad ogtahay magaalooyinka Spain ee ay tahay inaad booqato. Xagee u socotaa safarkaaga wadada? Xusuusnow inaad la jaanqaadi doontid sharciyada ay soo rogtay xaaladda deg-degga ah ee 'Covid-19'. Raadi sharciyada beel kasta oo safarka ku raaxee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Meelaha Dalxiiska loo tago » Magaalooyinka Isbaanishka ugu fiican ee lagu booqdo baabuur guga
7 suxuunta caadiga ah ee Mexico oo ay tahay inaad isku daydo